ကိုကင်းတဏှာ၏အသစ် neurophysiological အညွှန်းကိန်း: evoked ဦး နှောက်အလားအလာများနှင့် cue modulated တုန်လှုပ်တုံ့ပြန်မှု (2004) ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
J ကို Psychopharmacol ။ 2004 Dec;18(4):544-52.
Franken ih1, Hulstijn KP, CJ တံဆိပ်ခတ်ပါ, Hendrik VM က, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က.
ကိုကင်းဘို့စွဲလမ်းကင်းမှီခို၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တဏှာနှင့်အတူပြဿနာများတစ်ခုမှာ၎င်း၏တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအသားအရေအပြုအမူနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအဖြစ်ရိုးရာ psychophysiological ညွှန်းကိန်းဆနျ့ကငျြရလဒ်များပါပြီ။ တဏှာ၏ဤဆောင်ရွက်ချက်များ Self-အစီရင်ခံတဏှာနှင့်အတူသာအတန်အသင့်ပတျသကျမှတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်အဖြစ်အပျက်-related ဦးနှောက်အလားအလာ (ERPs) နှင့် cue modulated ထိတ်လန့်တုန့်ပြန် (CMSR) ကိုကင်းတဏှာအဘို့အညွှန်းကိန်းအဖြစ်တွက်ချက်နေကြသည်။ နှစျဆယျ့တစျ abstinent ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များ Self-အစီရင်ခံတဏှာရမှတ်များ၏ပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲအပေါ်အခြေခံပြီးအမြင့်အနိမ့် cravers အုပ်စုတစ်စုခွဲခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များ, ကြားနေသာယာသော, မနှစ်မြို့ဖွယ်နှင့်ကိုကင်း-ဆက်စပ်ရုပ်ပုံများကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါ ERPs နှင့် CMSR တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားကြောင့်ကိုကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်သည့်ကိုကင်းဓါတ်ပုံတွေအပေါ် ERP ၏လုပ်ခဲ့ပြီးနှေးကွေး-အပြုသဘောလှိုင်းတံပိုး (SPWs) ပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သာမြင့်သော cravers cue-ရူးနှမ်း SPWs နှင့် Self-အစီရင်ခံကင်းတဏှာအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အကြံပြုသည်ကိုကင်းတွေကိုအပေါ်ပိုမိုကြီးမား SPWs ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ ERP အစီအမံမတူဘဲအသုံးပြုပုံ CMSR ကင်းပုံနဲ့ကြားနေဓာတ်ပုံများကိုအကြားခွဲခြားမရခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် CMSR အတိုင်းအတာအပေါ်နည်းပါးနှင့်မြင့်မားသော cravers အကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များ evoked-အလားအလာပါရာဒိုင်းအညွှန်းကိန်း cue-ရူးနှမ်းတဏှာမှအလားအလာရလဒ်များကိုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပြသပါ။ ထိတ်လန့်မော်ဂျူများအသုံးပြုမှုနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးထိုက်တန်ပါတယ်။